Fihanaky ny "coronavirus" :: Miandrandra ny fanidiana ny sisin-tany ny ankamaroan’ireo depiote • AoRaha
Fihanaky ny « coronavirus » Miandrandra ny fanidiana ny sisin-tany ny ankamaroan’ireo depiote
Adihevitra maharitra ora maro ny mika­sika ny fihanaky ny valanaretina “Covid-19”, tetsy amin’ny Antenimierampirenena Tsimbazaza, niaraka tamin’ireo solomba­vambahoaka sy ny minisi­te­ran’ ny Fahasalamam-bahoaka sy ny minisiteran’ny Fitaterana, fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro, omaly.
Saika nangataka ny hanidiana ny sisin-tany avokoa ny ankamaroan’ireo depiote nandray fitenenana. Nisy ihany anefa no nanome soso-kevitra hafa. Nilaza ny mini­sitra, Andriamandranto Joel fa mila jerena avokoa ny fian­traikany amin’ny fanakatonana ny sisin-tany. “Hiandry olona voan’ny aretina ve isika vao hanakatona sisin-tany sa hatraiza ny fetra farany ahafahana manao an’izany? Ny firenen-dehibe toa an’i Etazonia aza efa nanakatona ny azy”, hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Sakaraha, Razakan­drainy Henri Dominique.
Niombon-kevitra tamin’ itsy farany koa ny solombavambahoaka Me Razafimanantsoa Hanitriniaina. “Efa tsy valanaretina tsotra fotsiny ity “Coronavirus” ity fa efa aretina manerana an’izao tontolo izao. Ny fanidiana ny sisin-tany no zavatra andra­sana amin’ny fitondram-panja­kana. Tsy voavidintsika ny aina. Marina fa efa nisy ny fepetra sy fanapahan-kevitra noraisina, toy ny famendrahana ranom-panafody ny olona hiditra eto Madagasikara. Tsy izany no vahaolana fa ny firenena manan-katao aza efa manidy ny seranana rehetra”, hoy izy.
Sarotra ho an’ny ankabe­azan’ireto depiote ireto ny hino ny fahavononan’i Madagasikara hiatrika ny aretina. Nilaza ny depiote voafidy tao Arivonimamo, Rakotomanjato Rodin, fa ny pesta aza mbola tsy voafehintsika mainka fa ity “Coronavirus” ity.
An-kilany, namaly an’ireto depiote ireto ny minisitry ny Fitaterana, Andriamandranto Joel fa “alohan’ny handrai­sana fanapahan-kevitra hentitra amin’ny fanakatonana sisin-tany dia mila tsirihana avokoa ny fiantraikany, indrindra eo amin’ny lafiny toekarena. Afaka ny hanarina ny toeka­reny haingana ireo firenen-dehibe efa nanidy ny azy aorian’ny fandalovan’ny aretina “Coronavirus”. Mila eritrere­tina tsara ny antsika eto Mada­gasikara mba tsy hisian’ny olana goavana indray”.
Nohamafisiny fa tao anatin’ izay roa volana voalohany izay, eo amin’ny sehatry ny fizahan­tany, dia nihena ny famandrihana nataon’ireo mpizaha tany.
Notsindrian’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Rakotondra­zafy Lalatiana, ihany koa fa sarotra ho an’ny ftiondram-panjakana ny hanidy ny sisin-tany. Tsy ny olona ihany no afaka mifamezivezy fa na ireo entana ihany koa dia tsy afaka miditra eto Madagasikara. Mbola manafatra entana, ohatra ireo entana ilaina andavanandro isika. Tsy te hame­traka krizy ara-tsosialy ny fanja­kana ka tsy azo hamaivanina izany.
Fihanaky ny valanaretina Olona vaovao 128 nifindran’ny Covid-19 tao anatin’ny telo andro
Fahabangan-toerana ao amin’ny Ceni :: Miandry ny fankatoavan’ny HCC ny fametraham-pialan-dRakotonarivo Thierry
Fivoaran’ny andro ratsy :: Mihamafy ny herin’ilay rivo-doza any atsinanan’ny Nosy